Ama-Movie Ahamba Phambili Ama-50 Okubukwa Ku-Prime Video (2020) - Ezokuzijabulisa
Izikhathi eziningi sibhekana nezinkinga ezithile ezincane eziqubuka njalo maqondana nokubuka ama-movie ku-Amazon Prime Video noma kungaba noma iyiphi insizakalo yokusakaza. Inkinga enkulu ukuthatha isinqumo njengokuthi ubukeleni kunzima kakhulu ngokuqoqwa okubanzi kwama-movie ongakhetha kuwo.
Kunezinkulungwane zama-movie amahle. Ukubheka lawa ma-movie ku-Amazon Prime Video bese uzama ukunquma ukuthi iyiphi ofuna ukuyibuka kungaba umsebenzi onzima kakhulu kunoma ngubani.
Singazama konke okusemandleni ethu ukukusiza wenze isinqumo esifanele mayelana nalokho ongakubuka ngokukunikeza uhlu lwama-movie asakazwa njengamanje. Lawa ma-movie asakazwa mahhala ngokuphelele ku- I-Amazon enobulungu obuyinhloko .
Uhlu lwama-movie amahle kakhulu ongawabuka ku-Prime Video:
1. Indoda Yokugcina Emnyama eSan Francisco (2019)
Ebhekene nokufuduka emzini wakhe owakhiwa nguyisemkhulu ngenxa yokunothisa endaweni yakhe yaseSan Francisco, uJimmie nomngani wakhe omkhulu, uMort, baqala umkhankaso wokufuna kabusha indlu ngaphambi kokuba ishintshwe. Umzabalazo wabo uvivinya ubungani babo futhi ubaphoqa ukuthi babuze ukuthi bakuphi.
2.Ukulwa Nomndeni Wami (2019)
Kuyi-movie yamahlaya futhi esekwe endabeni eyiqiniso yeWWE wrestler Paige. Ukulwa ne-movie yami Yomndeni kukhombisa indaba yomndeni we-wrestling yangempela. Kubhaliwe futhi kwaqondiswa nguStephen Merchant. Le filimu iqopha oFlorence Pugh kanye nomlingisi oqinile ohlanganisa uDwayne The Rock Johnson, Lena Headey, Vince Vaughn, nabanye. Ku-movie, uPugh nomfowabo (uJack Lowden) bazama i-WWE futhi, lapho oyedwa wabo edlula, uPugh uphoqeleka ukuba abhekane nezwe lomqhudelwano wobungcweti eyedwa.
3. Umbiko (2019)
Kuyinto evusa amadlingozi ehlobene nezepolitiki, ukusukelwa kwezimoto, kanye nemizamo yokubulala yokungezwani okungalindelekile kokudotshwa kwemibhalo, iThe Report ikhombisa umsebenzi wesigungu uDaniel Jones (Adam Driver), okhethwe nguSenen Dianne Feinstein (Annette Bening) uphenye ngokucekelwa phansi kokuqoshwa kwemibuzo kwe-CIA cishe ngonyaka ka-2005. Sekuyiminyaka eminingi uJones nethimba lakhe bebheka izigidi zamakhasi amadokhumende abhalwe kabusha, konke lokhu bebezama imizamo yezikhulu zikahulumeni zokuqeda amandla abo. Lo Mbiko uyisasasa esishubile.
4. Kuyimpilo Emangalisayo (1946)
Ibhayisikobho yakudala kaKhisimusi enomdlalo odumile uJames Stewart, It is a Wonderful Life ulandela uGeorge Bailey (Stewart), ongusebhange edolobheni laseBedford Falls futhi olungiselela ukuziphonsa ebhulohweni noma kunini. Ngokungazelelwe, ingelosi egama linguClarence (Henry Travers) ivela lapho izosindisa uGeorge, bese imthatha ithathe uhambo ngezikhathi ezimnandi nezibaluleke kakhulu empilweni kaGeorge, emkhombisa zonke izinto ezinhle azenzela abanye abantu. .
5. IManchester by the Sea (2016)
Iqondiswe nguKenneth Lonergan, isethwe edolobheni laseManchester, yidolobha u-Lee Chandler (uCasey Affleck) angaze afune ukubuyela kulo. UChandler usebenza njengomuntu ogcina impahla eQuincy, ehlala kude nanoma yikuphi ukuxhumana nokudala kwakhe. Usizi lumletha ekhaya; umfowabo, uJoe (Kyle Chandler), ushone ngokuzuma, futhi eshiya ngemuva indodana esencane, uPatrick (Lucas Hedges) ucela uLee ukuthi ambheke.
Ngaphakathi kukaLlewyn Davis (2013)
Ngaphakathi uLlewyn Davis ukhombisa uDavis njengoba ezama ukwenza umsebenzi wakhe womculo uqhubeke ngemuva kokuzibulala kukazakwabo womculo. Izimali zakhe nazo azizinhle impela, kanti nesithandwa sakhe sakudala, uJean (Carey Mulligan), ukhulelwe ingane okungenzeka ukuthi ngeyakhe, akafuni lutho olumhlanganisa naye.
Kwenziwe ngumqondisi waseKorea uPark Chan-wook ophinde abe ngumqondisi owine imiklomelo ka-Oldboy. Ibhayisikobho ye-Handmaiden yifilimu ebukhali esethwe ekuqaleni kwawo-1900 ngesikhathi sokuhlasela kweJapan eKorea. Le filimu ikhombisa abesifazane ababili, omunye yintokazi yaseJapan esencane endaweni esekusithekeni, kanti enye ngowesifazane waseKorea oqashwe njengencekukazi yakhe entsha. Owokuqala akazi yini ukuthi lo wesilisa uhlela indoda enenkohliso ukukhwabanisa owesifazane efeni lakhe
8.Awukaze Ubekhona Ngempela (2017)
UJoaquin Phoenix ulingisa njengomakadebona womuntu ohlukumezekile ofaka ukuhlukumezeka kwakhe ekuzingeleni amantombazane alahlekile ukuze aziphilise. Kepha, njengoba amaphupho akhe amabi eqala ukumfica futhi eqhubeka nokungena ngaphezulu kwekhanda lakhe, uqala ukwambula uzungu olusongela ukumbulala noma ukumhlenga, kuya ngomgwaqo awuthathayo.
UGloria ukhombisa indaba yowesifazane oneminyaka engama-58 ongafuni lutho emhlabeni ngaphandle kokuthi azizwe esemusha futhi. Uhambo lwakhe lokuthola injabulo luphawulwa ngamanye amadoda angahleliwe aze ekugcineni ahlangane futhi awele phansi uRodolfo. Ngokushesha uGloria uthola amandla okwamukela iminyaka yakhe yangempela futhi akhule abe ngowesifazane.
Ngemuva kokushona kukanina, u-Annie Graham (Toni Collette) ulwela ukugcina imizwa yakhe ngenkathi egcina ukuhleleka okuthile endlini yakhe. Ngemuva kokuba enye inhlekelele ihlasele umndeni wakhe, nokho, u-Annie uphuke ngokuphelele futhi akakwazi ukuzigcina ehlangene, futhi isimo sakhe siba sibi kakhulu njengoba izehlakalo ezingajwayelekile zithinta yena nomndeni wakhe.
Iyaziwa njenge-opera breakup movie eqondiswa ngu-Ari Aster. I-Midsommar ikhombisa ukuthi ifana ncamashi nalokho okwaziwa ngakho. Kepha, ngendlela esolisayo. Kukhombisa izithandani zaseMelika ezinezinkinga ezinkulu zobudlelwano ezihamba nabangane ukuya kumkhosi wehlobo. Kuphazamisa kakhulu futhi kuphazamise kakhulu.
12.Logan Lucky (2017)
Ngemuva kokuphelelwa ngumsebenzi okuwukuphela kwakhe, isisebenzi sokwakha uJimmy Logan (uChanning Tatum) uzama kanzima ukubuyisa inhlanhla yakhe, futhi uyazi kahle indlela yokukwenza. Ngemuva kokusebenza kuCharlotte Motor Speedway, wazi konke ngohlelo lwe-pneumatic tube olushintsha imali ngaphansi kwethrekhi. Ngokushesha, uJimmy uqasha umfowabo ohlome ngesikhali esisodwa uClyde (Adam Driver) nodadewabo uMellie (Riley Keough), kanye no-Joe-Bang (Daniel Craig) ongumqaphi ophephile. Kepha, ushintsho ohlelweni lokwakha lwabaphoqa ukuthi basheshe bahambe, ngosuku lomjaho weCoca Cola.
13. IMpi Yomshoshaphansi (2018)
ICold War ikhombisa impilo kaWiktor (uTomasz Kot) noZula (Joanna Kulig), ongumqondisi womculo nomculi ngokulandelana, bayahlangana futhi bathandane ePoland ngemuva kokuphela kweMpi Yesibili Yomhlaba. Ngokushesha, laba bobabili bakhukhuleka bewela imingcele, bengena bephuma komunye nomunye. ICold War yifilimu enhle okufanele uyibuke.
14.Big Sick (2017)
I-movie iqala ngoKumail onenkinga yokwakha umsebenzi wamahlaya wokuma ngenkathi emba imvelaphi yakhe yasePakistan ngale ndaba. Ngemuva kokuhlangana nentombazane egama lingu-Emily (Zoe Kazan), ngokushesha iphenduka indawo yokuma ubusuku obubodwa, bese kuthi kamuva ibe yibudlelwano, bobabili baqala ukubhekana nezinkinga ezithile. Abazali bakaKumail bafuna ahlale kahle nentombazane yasePakistan okuholela ekutheni lezi zithandani zihlukane. Ngokushesha, ukutheleleka kushiya u-Emily equlekile. Ngenkathi uKumail evakashele u-Emily esibhedlela, uhlangana nabazali bakhe, afunde kabanzi ngabo no-Emily.
Kungumqondo weWild West, onemigqa eminingi yamahlaya. URp Depp uzithola esedolobheni laseNgcolile futhi edlala indawo yokuba yisherifu ekufuneni amanzi asedolobheni alahlekile. Iqondiswe nguGore Verbinski.
16. Impi Engabonakali (2012)
Imayelana nesigameko sokuhlukunyezwa ngokocansi phakathi kwamasosha ase-U.S. Impi Engabonakali ikhombisa izingxoxo nezingqalabutho zamagatsha ahlukene e-United States Armed Forces, ezikhumbula izehlakalo ezenzeka lapho kuhlaselwa ngokocansi. Izindaba zabo ziveza ukuntuleka kobulungiswa kanye nokungabikho kokunakekelwa kwabasindile. Abasindile bafuna ushintsho endleleni amasosha aphatha ngayo ukuhlukunyezwa ngokocansi nalabo abasindile.
17. Isibani (2019)
I-Lighthouse iqondiswa nguRobert Eggers, iyibhayisikobho engajwayelekile kakhulu yango-2019. Le movie ikhombisa i-Lighthouse eyenzeka cishe ngekhulu le-19 leminyaka. Babodwa futhi basele dengwane esiqhingini, uWinslow noWake bayalwa bodwa nokuqala komsangano. Ukudlala kukaPattinson noDafoe kuyamangalisa.
U-Awkwafina udlala indawo kaBilli Wang, ongumbhali futhi osheshe afunde ukuthi ugogo wakhe, uNai Nai (uZhao Shu-zhen), usezoshona maduze nje ngenxa yomdlavuza wamaphaphu ongapheli eChina. Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, abazali bakaBilli, uHaiyan Wang (Tzi Ma) noLu Jian (Diana Lin), kanye nawo wonke umndeni, bavimbela uBilli ekwaziseni uNai Nai ukuthi usalelwe izinsuku ezimbalwa kakhulu ukuthi aphile. Ngenxa yalokho, isithembiso esanikezwa ngumndeni wakhe simthwalisa kanzima uBilli, kepha ukuxhumana kwakhe nogogo wakhe amthandayo kuhle futhi kuthinta inhliziyo.
19. Indlovukazi yase-Afrika (1951)
Enye yezingxenye ezihamba phambili ze-Amazon Prime ukuthi ivumela abasebenzisi bayo bayo yonke iminyaka ukuthi babuke amafilimu aphume amashumi eminyaka ngaphambi kokuthi bazalwe. Indlovukazi yase-Afrika iyi-movie enjalo ngumqondisi uJohn Huston. Le ndaba ikhombisa impilo eMpini Yezwe I, njengesithunywa sevangeli okuthiwa uRose Sayer (Hepburn) nokaputeni wesikebhe somfula, uCharlie Allnut (Bogart). Ibhayisikobho i-African Queen ithatha uCharlie noRose ezingozini eziningi.
I-Knives Out (2019)
Le movie imayelana nombhali wamanoveli odumile ofelwe ukufa okungalindelekile ngobusuku obubodwa ngemuva kokuhlangana komndeni okwenza amaphoyisa asole wonke umuntu. UDaniel Craig udlala indawo yomseshi uBenoit Blanc, osiza ukuphenya ngokufa futhi akushiye uqagela ukuthi ngubani ozoba yicala laleli cala.
21.I-Vast of Night (2020)
Le thriller ye-sci-fi ikhombisa opharetha abancane abasebenza nge-switchboard kanye no-DJ womsakazo othola imvamisa yomsindo engaqondakali esethule uchungechunge lwezinto ezitholakele eziholele ekujuleni kokungaziwa.
22. I-Rocketman (2019)
URocketet usakaza uTaron Egerton njengomdlalisi futhi ukhombisa ukuziphendukela kukaJohn kusuka endodeni yasedolobheni elincane kuya kosaziwayo bamazwe omhlaba. Le filimu ibuye iveze uJamie Bell njengomlingisi wezingoma zikaJohn nozobhala naye uBernie Taupin.
23. I-Cabin in the Woods (2012)
I-movie kaDrew Goddard ethi The The Cabin the Woods inendaba eyingqayizivele kakhulu ekhombisa iqembu lentsha elihlushwa amandla amabi ngenkathi lihlala egumbini elikude ngendlela entsha ngokuphelele. UGoddard nombhali osebenza naye uJoss Whedon udlalise futhi wasonta imihlangano yalolu hlobo ngezindlela okungekho muntu obonayo eza ngalo, futhi umphumela wokugcina kwaba yifilimu ehlekisa ngendlela esabekayo, futhi kunezinto eziningi ezifihliwe ezifuna ukubukwa okuningi. Uma ungakaboni i-The Cabin kwi-movie ye-Woods okwamanje, ngakho-ke kungokwakho okuhle ukuthi wazi okuncane ngangokunokwenzeka ngale filimu. Kepha, uma usuyibonile, khona-ke kunethuba elihle lokuthi uzogcina ukuyibuka kaninginingi.
24. Umbala Osheshayo (2019)
Kukhonjiswa izizukulwane ezintathu zabesifazane abanamakhono athile anamandla bayahlangana kule thriller ye-sci-fi edalula ukucwasana ngokwebala nokwehlukana kwenzalo ngemuva kwendaba eyethusayo yowesifazane olandelwa amandla amabi ngenxa yamandla athile.
25. Abangcwele Boondock (2000)
Lapha kukhombisa ukuthi abazalwane ababili baseBoston bazithola besemkhankasweni omkhulu wokwehlisa isixuku saseRussia kule filimu yesenzo eyaba ngundabuzekwayo ezweni lezokuzijabulisa lasekhaya yize kwakunochungechunge lwezinkinga. USean Patrick Flanery noNorman Reedus badlala izelamani zakwaMacManus, inhlanhla yazo empeleni ebaguqula babe ngamaqhawe endawo futhi ibafaka endleleni yokushayisana ne-ejenti ye-FBI eccentric edlalwa nguWillem Dafoe.
26. I-Murderball (2005)
Kukhombisa abadlali kuligi yombhoxo eyi-quad. Le filimu ilandela amaqembu amaningi azama ukuncintisana kumaParalympic Games e-Athens, eGrisi, ngenkathi ekhombisa izimpilo zabadlali, yini ebalethe kulo mdlalo, nokuthi lo mdlalo usho ukuthini kubo.
27. I-Avengers (2012)
Cishe ngonyaka ka-2012, iMarvel Studios yahlanganisa zonke izinkanyezi zamafilimu ama-solo ama-solo amaningi eqenjini elikhulu elaziwa nge-Avengers. Ama-Avenger abe ngumshintshi womdlalo walo lonke uhlobo lwe-superhero futhi nakanjani uyathandwa yibo bonke ababukeli.
28.U-Honey Boy (2019)
Ibonisa impilo yomlingisi wezingane u-Otis Lort njengoba ekhuphuka ngempumelelo encane eya enkanyezi yaseHollywood eyazilimaza ngemuva nje kokuzabalaza. Ubaba wakhe owayemhlukumeza futhi eyisidakwa ukhombisa ukuba seduze kokungenzeki njengoba ubudlelwane babo obuyingozi buwohloka phakathi neminyaka eyishumi.
29. Injongo: Akunakwenzeka - Ukuwa (2018)
Le filimu iqala nge-ejenti eyimfihlo u-Ethan Hunt (Tom Cruise), osemgwaqeni we-Impossible Missions Force, ezama ukuthola amanye ama-co-plutonium cores. Lapho ukuthunywa kungahambi kahle, ama-cores agcina ewela ezandleni zeqembu lamaphekula. Ukuwa kuyi-movie yesenzo ephezulu kakhulu.
30. Ukuphila Okuphezulu (2019)
Ukuphila Okuphezulu yifilimu e-erotic sci-fi horror. UJuliette Binoche udlala indawo kaDkt Dibs, ongumbonisi womkhumbi othumela izigebengu ukuba zizame ukukhipha amandla emgodini omnyama. Endleleni, uDkt Dibs naye wenza izivivinyo zocansi ezigebengwini okuholela ekufeni kwazo. Kamuva umbulali uMonte (uRobert Pattinson) usele yedwa nendodakazi yakhe futhi uzama ukusinda njengoba besecicini lokufa.
31. Ibanga lesishiyagalombili (2018)
Izikhungo zebhayisikobho zebanga lesishiyagalombili ezungeze uKayla oneminyaka engu-13 ubudala njengoba edlula evikini lokugcina lezinsuku zakhe zesikole esiphakathi. Ibanga lesishiyagalombili yi-movie emayelana nesikole esiphakathi ekhombisa abafundi bangempela abaphakathi, okwenza kube mnandi kakhulu futhi kujabulise kakhulu ukuyibuka.
32. UMuzi Olahlekile WakwaZ (2016)
Ngokususelwa encwadini ka-2009 enegama elifanayo, i-The Lost City of Z ikhombisa indaba eyiqiniso yomhloli wamazwe waseBrithani uPercy Fawcett (Charlie Hunnam), ongena e-Amazon ekuqaleni kwekhulu lama-20. Uthola ngokungalindelekile ubufakazi bempucuko ebingaziwa phambilini eyayike yaba khona esifundeni ngesikhathi esohambweni lwakhe. Ngokushesha ubuyela ehlathini futhi uzimisele impela ukufakazela iphuzu lakhe nokuthola iLost City of Z.
33. Yeka Ukwenza Sense (1984)
Cishe ngo-1984, umqondisi uJonathan Demme wahlangana neqembu elibizwa ngeTalking Heads for Stop Making Sense, elaziwa njengelinye lamafilimu ekhonsathi amangalisa kunayo yonke. UDemme uqophe i-movie kalula emidlalweni emine ebukhoma ePantages Theatre eLos Angeles kanti iTalking Heads isize ukugqoka uhlelo lwezimpilo zabo.
34. Ungaliqeqesha Njani Idrako Yakho (2010)
Akuwona wonke amafilimu e-animated ayi-classic esheshayo, kepha i-How To Train Your Dragon iphila ngokuvumelana nohlobo lwakho futhi ingaphezu kwalokho okulindele. Kususelwa encwadini enegama elifanayo. Ungayiqeqesha Kanjani iDrako Yakho ikhombisa impilo yomfana omncane waseViking ogama lakhe linguHiccup (uJay Baruchel). Uyabona ukuthi empeleni ama-dragons angabambisana nabantu esikhundleni sezitha zabo ezibulalayo.
Ngenqubo yokulinga, kanye nokuqhuma okuthembekile okuningana, izitimela zeHiccup, nezibopho nodrako omncane omnyama ogama lakhe linguToothless, eligcina liguqule umhlaba wakhe unomphela. Ukugqwayiza okumangazayo kusathatha umoya wethu sonke eminyakeni eyishumi ngemuva kokuphuma kwale filimu. Kuveze i-franchise, kepha lokhu kuseyi-movie ehamba phambili ku-trilogy.
35.Vuthela Umuntu Phansi (2020)
IBlow the Man Down iyi-movie emnyama yamahlaya efike ku-Amazon Prime. UMorgan Saylor noSophie Lowe baboniswa njengodadewabo uMary Beth noPriscilla Connolly. Lapho uMary Beth ebulala indoda eyayizama ukumlimaza, uPriscilla ukholelwa ukuthi igazi lijiyile kunamanzi bese esiza udadewabo ukuvala ubufakazi obushiywe ngaphandle. Kepha, kodade baseConnolly, kunzima ukugcina izimfihlo edolobheni elincane, abazi ukuthi bangathembela kubani.
36. Ukuguqulwa Kwokuqala (2017)
U-Ethan Hawke udlala indawo ka-Ernst Toller, ongumfundisi futhi ongahlushwa nje inkinga eyodwa yokholo. Empeleni uhlushwa yibo bonke. Lapho owesifazane okhulelwe ogama lakhe linguMary Mensana (u-Amanda Seyfried) emncenga ukuba eluleke umyeni wakhe, uMichael (uPhilip Ettinger), umfundisi ngokushesha uzithola esiza futhi emukela umbono kaMichael ngomhlaba.
37. UPaterson (2016)
U-Adam Driver ulingisa njengoPaterson, indoda esebenza njengomshayeli webhasi. Kodwa empeleni, uPaterson uyimbongi ongakafundi ukwamukela ngokugcwele leso sici sakhe. I-movie yonke ikhombisa isikhathi esingangesonto, futhi lapha kule movie singabona inqubo yansuku zonke kaPaterson nomkakhe, uLaura (Golshifteh Farahani). Ngokushesha, iphethini liyaphuka futhi amashwa ahlasela impilo yakhe.
38. ICasino Royale (2006)
ICasino Royale, eyabelwe ukuthola ithagethi ngesikhathi somqhudelwano obuseCasino Royale. IBond yakha ukuxhumana ngokomzimba nangokomzwelo noVesper Lynd (Eva Green), ongumlingani wakhe wecala. UVesper yileyontombazane uBond ayithanda kakhulu.
39. I-Terminator (1984)
I-Terminator ngokusobala iyindaba yokuqala kaSara Connor kaLinda Hamilton. Ngaphambi kokuthi uSarah abe yiqhawe lesenzo sowesifazane, wayaziwa njengentokazi engahambisi ndawo eyayisebenza njengoweta. Isosha lokumelana nabantu uKyle Reese (Michael Biehn) ubuyiselwe emuva emuva ngesikhathi ukusiza nokuvikela uSarah kwiT-800 Model Terminator edlalwa ngu-Arnold Schwarzenegger. NgokukaKyle, uSarah uhloselwe ukuzala uJohn Conner, indoda ezohola isintu ekunqobeni ngokuzayo. Futhi iT-800 ifuna ukubulala uSarah. Ekugcineni, konke kwehlela kowesifazane oyedwa nasemshinini.
40. Umkhondo (1985)
Isikweletu esihle ngesabalingisi abahle abahlanganisa uTim Curry, uChristopher Lloyd, u-Eileen Brennan, uMadeline Kahn, uMichael McKean, uMartin Mull noLesley Ann Warren. Ngobusuku obunesiphepho, uMnu Brody uqoqe iqembu labantu angabazi esithabathabeni somuzi wakhe njengoba ehlose ukubabulala. Kepha lapho izidumbu ziqala ukuhleleka, unesiqiniseko sokuthi kukhona umbulali phakathi kwazo.
41. Ukukhasa (2019)
Kule movie Crawl, isiphepho esigabeni 5 sihlanganisa owesifazane osemusha ogama lakhe linguHaley Keller (Kaya Scodelario) nalawo ma-gator ayingozi njengoba amanzi ekhuphuka ekhaya lakhe. Ngenhlanhla, uHaley uyabhukudi onamandla, futhi uphumile ukuyosindisa ubaba wakhe, uDave (uBarry Pepper). Kepha kulokhu, ama-gator anamandla amakhulu, futhi avimba konke ukuphuma endlini. UCrawl ukhombisa ukungezwani okukhulu ngezingcingo eziseduze zikaHaley, uDave, kanye nenja kaHaley, uSugar. Kepha umndeni wakwaKeller kufanele ukhathazeke ngaphezu kwama-gators noma isiphepho. Ukukhasa kubonisa ngokoqobo impi yezimpilo zabo, futhi kudala nesipiliyoni esesabekayo se-horror.
42. UCreed II (2018)
UCreed II ungukulandelana kweSivumo sokholo sokuqala okusebenza futhi nokulandela ngqo kuRocky IV. Kwakuyimpumelelo enkulu ngokunikeza u-Adonis Creed (Michael B. Jordan) noRocky Balboa (uSylvester Stallone) izindaba eziqinile nemizwa eminingi eyinkimbinkimbi yokusebenza. U-Ivan Drago (uDolph Lundgren) uphinde angene ezimpilweni zabo okuphonsela uCreed inselelo yokulwa nendodana yakhe, uViktor Drago (uFlorian Munteanu).
Kukhona inhlanganisela yokuwa ngokomzwelo nangokomzimba okuhlukanisa uCreed and Rocky ngaphambi kokubabuyisa ndawonye futhi. Ngakho-ke, uCreed II wenze umsebenzi omangalisayo wokwenza ifomula isebenze futhi.
43. Ukuhlangana okusondele kohlobo lwesithathu (1977)
Le movie iqondiswa nguSteven Spielberg. I-Close Encounters of the Third Kind ikhombisa indaba yesisebenzi esinekhola oluhlaza okwesibhakabhaka esihlala e-Indiana, impilo yaso eguqukayo ngemuva kokuhlangana okungajwayelekile nento endizayo engaziwa.
Le filimu ihlanganisa uSpielberg nomlingisi weJaws - uRichard Dreyfuss, odlala indawo kaRoy Neary, indoda okuhlangana kwakhe nayo kumfaka ebudloveni bamaUFO obuthinta ngokoqobo ubudlelwane bakhe nanoma ubani omzungezile.
Umqondisi -Spielberg uqokwe njengomqondisi ovelele. Ize yazuza nge-cinematography yayo nokuhlelwa komsindo futhi.
44. UChi-Raq (2015)
Le filimu ikhuluma ngeqembu labesifazane abathatha isinqumo sokugodlela abathandana / abalingani babo ucansi baze bavume ukunqanda udlame lwamaqembu ezigelekeqe olwenzeka endaweni yakubo eChicago.
45. Ukuqala (2010)
Lesi yisasasa esabhalwa futhi saqondiswa nguChristopher Nolan. Iphonsa uLeonardo DiCaprio njengesela lobuchwepheshe obuphakeme elinekhono lokweba imininingwane ezingqondweni ezingazi lutho zezinhloso zakhe. Lapho eqashelwa uhlobo oluhlukile lomsebenzi okuwukufaka umcabango engqondweni yomuntu esikhundleni sokweba kuwo, kuphakamisa izigxobo, bese kumholela emsebenzini oyingozi kakhulu.
46. ​​Isizwe Sezingane Esinye (2019)
Isizwe Sezingane esisodwa yidokhumentari eyazuza umklomelo. Ihlola inqubomgomo okungenzeka ukuthi abantu abaningi bezwe ngayo kodwa bambalwa ngaphandle kwaseChina abake bayiqonda kahle. UNanfu Wang kanye noJialing Zhang bith abenzi bamafilimu abazalwa ngamaShayina babuyela emuva kunqubomgomo ka-1980 eyayingavumeli imindeni ukuthi ibe nezingane ezingaphezu kweyodwa futhi ize ibahlawulise uma benayo futhi ikhombisa nemiphumela eyaba nayo emindenini.
47. ITroop Zero (2019)
Le Amazon Original ikhombisa impilo yentombazane ekhanyayo (McKenna Grace) cishe ngonyaka we-1977 wasemaphandleni waseGeorgia ophupha ngokuphila esikhaleni. ULucy Alibar ungumbhali-mbhali futhi abaqondisi nguBert & Bertie. Lapho uGrace ekugcineni ethola ithuba lokuphila iphupho lakhe ngemuva komncintiswano kazwelonke, uqasha iqembu le-ragtag le-Birdie Scouts elingamsiza ukuthi afike lapho.
48. Angisiye uNegro Wakho (2016)
Umqondisi uRaoul Peck udale I Am Not Your Negro, okuyi-documentary ehlola imibono kaBaldwin nokuthi ihambisana kanjani hhayi nesiyaluyalu kuphela kepha neMelika yanamuhla. Angisiye uNegro wakho oshiya ababukeli bakhe benomqondo wokuthi umsebenzi kaBaldwin awukaze uqedwe, futhi futhi awukaze ubaluleke kakhulu.
49. Isitimela esiya eBusan (2016)
Ngubani ongakezwa ngale movie? Le filimu eyethusayo yaseNingizimu Korea ikhombisa iqembu labagibeli abagibele isitimela esinejubane ukusuka eSeoul kuya eBusan njengoba ukuqhamuka kwegciwane elibulalayo kuqala ukuguqula abantu babe izidalwa ezilambele inyama njengamaZombi futhi labo abasesitimeleni kumele bathole indlela ukusinda.
Lokhu kufana namafilimu amahle kakhulu e-zombie ake enziwa. Iqondiswe nguYeon Sang-ho. Igxile kakhulu eqenjini elincane labantu abangena esitimeleni njengoba bephoqeleka ukuthi bagcine ukungaboni ngaso linye kwabo kude ukuze bazigcine bephephile futhi nabathandekayo babo.
Le movie iphule amarekhodi amaningi ebhokisi-ehhovisi eSouth Korea nakwamanye amazwe futhi iphinde yaveza enye inkondlo elama-2020.
Le movie ibhalwe nguMindy Kaling. Ubuye walingisa kule movie empeleni emayelana nomethuli we-TV wasebusuku odumile oqashelwe iqembu lakhe lokubhala lohlelo lwakamuva aqala uchungechunge lwezinto ezingajwayelekile ezinemiphumela ethile emsebenzini wakhe. U-Emma Thompson uphinde waqokelwa indondo yeGolden Globe ngomsebenzi omuhle kangaka. Ngenkathi uKaling edlala owesifazane waseNdiya waseMelika ophoqelekile ukuzulazula emhlabeni wesilisa wamahlaya asebusuku.
Lolu uhlu lwama-movie amahle angama-50 esiwabhale ngenhla ongawabuka ku-Prime Video. Awudingi ukuya futhi ucinge yonke indawo ukuthi yimaphi ama-movie okufanele ngabe uwabukile njengoba lawa amanye ama-movie amangalisayo. Ngiyethemba uyayijabulela.
iwebhusayithi yokubuka ama-movie wamahhala
ama-movie aku-inthanethi mahhala akukho ukulandwa
uwathola kanjani amakhodi ephromo
mangaki amadivayisi ku-hulu plus
i-minecraft enderman esikhunjeni sesudi
izilungiselelo ezinhle kakhulu zomngane wokudlala amageyimu
amawebhusayithi wokubuka iziqephu mahhala